Box, ny safidy amin'ny Dropbox misy habaka malalaka 50GB | Avy amin'ny mac aho
Box, ny safidy amin'ny Dropbox misy habaka malalaka 50GB
Tato ho ato ary miaraka amin'ny fitomboan'ny fahita matetika, dia mampiasa ny cloud storage hananana ny antontan-taratasinay manokana sy momba anay amin'ny fitaovana elektronika rehetra, na amin'ny solosaina finday, amin'ny iPhone na amin'ny solosaina ho an'ny fianakaviana.
Hitanay ve ny maha isan-karazany an'ireo sehatra manome antsika ity serivisy fitahirizana rahona ity? SkyDrivena Dropbox Izy ireo dia sasany amin'ireo malaza sy be mpampiasa indrindra, na izany aza, izy ireo koa dia iray amin'ireo lafo indrindra amin'ny resaka fahaiza-mitahiry nifanarahana.
Eny, amin'ny fotoanan'ny vaovao farany ary manamboatra tanteraka ny Box, ity rindranasa resahantsika ity (Azo alaina ho an'ny Mac, Windows, iPhone ary Android), manolotra mpampiasa vaovao amin'ilay sehatra GigaBytes 50 toerana malalaka, izay mety raha toa ianao ka reraky ny hafatra avy amin'ny sehatra hafa handoa vola hampitomboana ny habaka satria eo amin'ny fetran'ny fahazoana avela ianao.
Ny hany takiana: ho mpampiasa vaovao eo amin'ny lampihazo
Ny endrika vaovao amin'ny sehatra Box Tena be ranoka izy io, mampiala voly ary ambonin'izany rehetra izany dia jereo:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Fampiharana hafa ho an'ny Mac » Box, ny safidy amin'ny Dropbox misy habaka malalaka 50GB
Salama daholo. Tena mahaliana ilay lahatsoratra. Androany dia misy safidy hafa amin'ny fitahirizana angona, saingy indrisy ho an'ireo orinasa, tsy misy na iza na iza amin'izy ireo manolotra faharanitan-tsaina amin'ny fandaminana ny fampahalalam-baovao. Isika rehetra dia mandany ny fotoantsika amin'ny fikarohana ilay antontan-taratasy eo afovoan'ireo lahatahiry an'arivony. Heveriko fa ho fanampin'ny habaka misy, zava-dehibe ny fiheverana ny faharanitan-tsaina aroson'ireto vahaolana ireto.
Azon'izy ireo atao ny mijery ny tetikasa DINO, arisivistra handrafitra ny vaovao amin'ny fomba lozika sy miverimberina. Ao amin'ny beta manokana izy ireo mba hamonjy, saingy heveriko fa mendrika harahina ity tetikasa ity.
Sonnet dia mandefa chassis fanitarana Thunderbolt 2 ho an'ny karatra PCIe